कलाकारको दसैँ : कसले कसरी मनाउँदैछन् ? | Ratopati
कलाकारको दसैँ : कसले कसरी मनाउँदैछन् ?
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १७, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ – वर्षभरी एक्सन कटमा रमाउने कलाकार हुन् वा संगीतिक कार्यक्रमकले व्यस्त गायक गायिका । दसैँको रौनकले सबैलाई छोइसकेको छ । दसैँको किनमेलदेखि गाउँको यात्रासम्मको हतारो सबैमा देख्न सकिन्छ ।
बजेटमा फिल्म क्षेत्रः के–के विषय समेटिए ?